Shiinaha 0.12mm Warshad Jiingado Gi galvanized ah oo loogu talagalay warshadda Afrcia iyo soosaarayaasha |Zhanzhi
Xaashiyaha birta ee galvanized waa nooc ka mid ah xaashida jiingado oo lagu sameeyay leexin iyo laabasho qabow.Waxay ku habboon tahay qurxinta saqafka, derbiyada iyo derbiyada gudaha iyo dibadda ee dhismayaasha warshadaha iyo madaniga ah, bakhaarada, dhismayaal gaar ah iyo guri qaabdhismeedka birta ah ee dheer.
7.zinc daahan: 30-275gsm
Saqafka saqafka ah ee birta ah ee galvanized galvanized wuxuu leeyahay sifooyinka miisaanka fudud, xoog sare, midab qani ah, dhismo ku habboon oo degdeg ah, caabbinta dhulgariirka, ka hortagga dabka, ilaalinta roobka, cimri dheer iyo dayactir la'aan iwm, waxaana si ballaaran loo faafiyey oo lagu dabaqay.
(2) Miisaan fudud oo dhintay, xoog sare, qallafsanaan maqaarka oo wanaagsan, iyo waxqabadka seismic wanaagsan ee wakiilka biyuhu;
(4) Dhisme iyo rakibid ku habboon, yaraynta culeyska shaqada ee rakibidda iyo gaadiidka iyo soo gaabin muddada dhismaha;
(5) xaashida birta ah ee profiled waa shay dhisme ku habboon deegaanka, kaas oo dib loo warshadayn karo.Shaacinta iyo adeegsiga xaashida birta ah ee astaanta u ah waxay waafaqsan tahay siyaasadda horumarinta waarta ee dhaqaalaha qaranka.
(6) Alaabta muraayada waa qaali waxayna leeyihiin cimri dhererkoodu liito marka la barbar dhigo alaabta la taaban karo ama dhoobada.
Saqafka saqafka ah ee birta ah ee galvanized wuxuu ku habboon yahay dhismayaasha warshadaha iyo madaniga ah, bakhaarada, dhismayaal gaar ah, saqafyada, derbiyada iyo qurxinta derbiga gudaha iyo dibadda ee guryaha qaab dhismeedka birta ballaaran, iwm.